पशुपतिलगायत शिवालयमा भक्तजनको भीड - प्रशासन प्रशासन
पशुपतिलगायत शिवालयमा भक्तजनको भीड
प्रकाशित मिति : 12 August, 2019 1:09 pm
काठमाडौं । पूर्णप्रसाद मिश्र साउन महीनाको अन्तिम सोमबार बिहानैदेखि पशुपतिनाथ मन्दिरलगायत देशभरका शिवालयमा पूजा एवं दर्शन गर्ने भक्तजनको भीड लागेको छ । साउन महीना र सोमबार भगवान् शिवको महीना एवं बार भएकाले प्रत्येक वर्ष यस समयमा भक्तजनको घुइँचो शिवालयमा हुने गरेको छ । साउनको अन्तिम सोमबार भएकाले पशुपतिनाथ मन्दिरमा तीजको जस्तै भीड लागेको पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्यसचिव डा प्रदीप ढकालले राससलाई जानकारी दिए ।
पशुपतिनाथ मन्दिरमा मेला व्यवस्थापनलगायत विषयमा आजै दिउँसो सङ्घीय संसद्का दुई समितिले अनुगमन गर्ने कोषले जनाएको छ । प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति र राष्ट्रियसभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिका सांसदहरुको समूह ३ बजेपछि अनुगमन गर्ने कार्यक्रम रहेको सदस्यसचिव डा. ढकालले सुनाए ।
विवाहित महिलाले पतिको दीर्घायु तथा अविवाहित महिलाले सुयोग्य वर प्राप्तिको कामनाले यो व्रत गर्ने भनिए पनि पुरुषले समेत व्रत गर्नुपर्ने शास्त्रीय भनाई रहेको धर्मशास्त्रविद् प्रा. डा. रामचन्द्र गौतम बताउँछन् । साउनको पहिलो सोमबारदेखि नै व्रत बसी शिवको पूजा–आराधना गर्नेहरुले आज गोदान, पूर्णपात्रलगायत धार्मिक कर्म गरी व्रत समापन गर्छन् ।
पैदल यात्रा गर्ने भक्तजनले ठूलो स्वरमा बोलबम भन्दै नारा लगाएका थिए । रातिदेखि नै ठूलो ‘साउन्ड सिस्टम’ मा सङ्गीत बजाउँदा बच्चा एवं वृद्धलगायत सडक छेउमा घर भएका स्थानीयवासीलाई प्रभाव परेको स्थानीयवासी सुशील सिम्खडाले गुनासो गरे।
साउन महीनाभर सुन्दरीजलबाट शुद्ध जल ल्याई पशुपतिनाथमा चढाउने भक्तजनको भीड लाग्छ । सोमबार र शनिबार बढी भीड हुने गरेको छ । पहिले तराईवासी मात्र सहभागी हुने गरेको बोलबम यात्रामा हाल पहाड एवं हिमालवासीको सहभागिता बढ्न थालेको छ । रासस
Tags : पशुपतिनाथ